ကယ်တော်မူကြပါအုံးဗျို့ — MYSTERY ZILLION
June 2009 edited July 2009 in Blog
ဘလော့က ဘယ်ကစလုပ်ရမှာလဲဟင်??? ကကြီး ကနေ အ အထိကျောကျ နော် ဘာမှမသိလို့ပါ :106:သနားကြပါ။
( ဒီစာဖတ်ပြီး နည်းနည်းလေးတောင်ပြောမပြသူများ မိန်းကလေးဆို ကုလားဗိုက်ရွှဲကြီးနဲ့ ညားပါစေ၊ ယောကျာ်းလေးဆို ငါးခုလပ် မုဆိုးမကြီးနဲ့ ညားပါစေ တန်ဒန်ဒန် )
*zin* wrote: »
ကြည့်မိတာကိုကအမှား..... :2::2::2: ကြိမ်စာထဲတော့အပါမခံနိုင်ဘူး.... :D:D localhost ထဲမှာလုပ်တဲ့နည်း အဲ့ဒါရရင် web ပေါ်တက်ကလိလို့ရပီ... :D:D:D သိပ်မကွာဘူး ဒါလေးအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်
ငါလဲ ဝင်ဖတ်မိတာကိုး ... ပြောရတော့မှာပေါ့ ... www.wordpress.com မှာ register လုပ်ပြီးရေးလို့ရပြီ ။ နောက်တစ်ခါထပ်မေးရင် မိန်းကလေးဆို ကုလားဗိုက်ရွှဲကြီးနဲ့ ညားပါစေ၊ ယောကျာ်းလေးဆို ငါးခုလပ် မုဆိုးမကြီးနဲ့ ညားပါစေ တန်ဒန်ဒန်
ဘလော့ ရေး ဖို့ site အများကြီးပါ.but ... www.wordpress.com
ကကောင်းပါတယ်.........:D.....နောက်တခါ မေးခွန်းသေချာ မမေးရင်...ကိုယ်ကြိမ်ကိုယ်ထိ...ဒိဒိဒိ:P
နာလည်းကံမကောင်းဘူး နဂိုကတည်းက မစွံရတဲ ့ကြားထဲ ကျိန်စာနဲ ့လာမိနေတယ်...
ကဲ ... ဒီမှာသာသွားကြည့်ပေတော ့...
mmwordpress.com လောက်သေချာအောင်ရှင်းပြ ပေးတဲ ့website မရှိတော ့ဘူး
သေချာနားလည်အောင်ဖတ်၊ ဒါမှ မရဘူဆိုရင်တော ့မောင်စေတန်ကြီးကိုတွားမေးတော ့...
အပေါ်ကပို့စ်တွေတင် တော်တော်ပြည့်စုံသွားလို့ ထပ်မရေးတော့ဘူး။
ကြိမ်စာကိုယူ တောင်းဆုလွဲသူ နွေပင်လယ်မှာ မြဲသင့်ကျွမ်းလောင်လို့
ညွှန်လိုက်ပါ့မယ် ဒီလင့် ပဲ။
အပေါက senior အစ်ကိုကြီးတွေပြောတာနဲတင်တော်တော် ပြည်စုံနေပါပြီ:67::67::67:
အဟီးးးးးးး :d :d :d တဘောအရမ်းကောင်းကြတာပဲ သိုင်းကျူးဘဲရီးမတ် :67: :67: :67:
ဒီ virus က ကျိန်စာ virus ဖြစ်နေတော့ ပိုဆိုးတယ်..
ကိုညီလင်းဆက် တို့....ကိုစေတန်ဂေါ့ တို့....ရေးတဲ့ Blog လုပ်နည်းစာအုပ်တွေရှိပါတယ်..
ကိုစေတန်စာအုပ်ကတော့ http://www.saturngod.net မှာရှိပါတယ်..
ရက်စက်ပါ့ ..:o:o:o:o:o အပေါ်ကအစ်ကိုများပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြသွားလို့ မပြောပြတော့ပါဘူး အသေးစိတ်သိချင်ရင်ကိုကိုစေတန်ကိုပြေပေးပါလိမ့်မယ်...:5::5::5::5:အရမ်းသဘောကောင်းတဲ့တိုကြီးပါ......သူ့ကိုဘဲမေးလိုက်တော့နော် .......နောက်တစ်ခါမေးခဲ့ရင် အမေးခံရတဲ့သူက ကောင်းမချောချောလေးနဲ့အဆင်ပြေပါစေဗျာ....:p:p:p:p:p:p:p
နည်းနည်းပွားကြည့်မယ်.. Sub-domain နဲ့ သူများဆီမှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီမှာ လုပ်လို့ရပါတယ် အရမ်းလွယ်ပါတယ် ..
နောက် ကိုယ်ပိုင် hosting ကိုယ်ပိုင် domain နဲ့နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်ခံပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာအုပ် လေးကို အရင်ဖတ်လိုက်ပါ ပြီးမှတဆင့်ချင်းပေါ့ နားမလည်တာရှိရင်လဲ လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ် ... ပိုပြီးတော့ ကောင်းကောင်းလဲ လုပ်လို့ရမယ် ပိုလဲနားလည်တာပေါ့
သိသလောက် ၀င်ဖော မယ် ဗျာ..
Hosting ထဲမှာ ရှိတဲ့installer ထဲက wordpress package ကို ရွေးရင် အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော် လဲ ဖြစ်ဘူးတယ်..ကျွန်တော် ကတော ့ဘာ သုံးသုံး..အရင်ဆုံး package ကို ဒေါင်းတယ်
ပြီးမှ hosting မှာ ပြန်တင်တယ်.. အိုတေ မှ စိုပြေတယ်..
wp2.8 ကျတော့net2ftp မှာတင်ရင် ဖိုင်ဆိုက်စ် ကြီးတယ် လို ့ဆိုလို ့
အပိုင်းလေး တွေ ခွဲ တင်ဗျာ..
ကိုစေတန်ကြီးရဲ့ စာအုပ်က ဘယ်လိုဒေါင်းဒေါင်း Access Denied ကြီးပဲ နှစ်ရက်ရှိပီ ကြိုးစားတာ (:((:(( ၀မ်းနည်းတယ် အယ် မမေးခင် အရင်ရှာဖတ်ဆိုလို့ မေးရဲပါဘူးဆို မေးမိသွားပီးး
လောလောဆယ်ကျော်စရာမလိုသေးတဲ့ ifile မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုစေတန်ရဲ့စာအုပ်ပါ။
ဂန်ဆာမီသာ ဂိုမာေ၀ါ ရှဲ့ရှဲ့ အာရိကတော ကျေးှဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ http://www.own-free-website.com/ ကနေ register လုပ်ပြီးလုပ်ပါတယ် လွယ်တယ်ဗျ သိပ်တော့မမိုက်လှဘူးအခြေခံလောက်ပဲသုံးရင်တော့အဆင်ပြေမှာပါ
သဘောကောင်းကြတာတောဟုတ်ပုံမရဘူးထင်တယ်.. ပြန်စာတွေများနေပါတယ်လို့.. ဒါကြောင့်ကိုးဟိုးဟိုး ..
နောက်တော့ forum ထဲမှာကျိန်စာတွေပြည့်နေတော့မှာဘဲ ဟီး :P
နာလည်း၀င်ကြည့်မိတော့ ပြောရတော့မပေါ့..ဟင့် မတတ်တဲ့သူကို ထပ်ပြီး ကျိန်စာတိုက်ပြီးမေးတယ်.. ဟင့် ( နာလည်း လုပ်တတ်သလောက်ကြောမယ်.. www.blogger.com ကိုသွား.. ကျော်ခွပြီးတော့ ပြီးရင် လုပ်သာလုပ်ကြည့်တတ်သွားလိမ့်မယ်.. ဟိုစမ်းဒီစမ်း ကြိုက်သလောက်စမ်း တစ်ခါစမ်း ငါးထောင် အဲ တော့ပစ်လွဲသွားပြီ အကျင့်ပါသွားလို့ ဟီး ပြီးရင် www.wordpress.com ကိုသွား အဲဒီမှာ ပိုတောင်လွယ်သေး လုပ်ရတာ မလုပ်တတ်ရင် www.winhein.wordpress.com ကိုလာပြီး comment သာပေးသွား.. ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်..
နာဖြေတဲ့အတွက် နင့်နှမ ချောချောလေး နာ့ပေးနော်. နှမပေးယောက်ဖလေး.. :D
ကယ်တော်မူကြပါအုံးဗျို့့ဆိုတော့ ၀င်ကြည့်မိတာပေါ့ဗျာ အထဲရောက်မှ ဆုတောင်းစာနဲ့လာတိုးတယ်
ကျွန်တော်လဲဖြေတယ်နော် ငါးခုလပ်နဲ့တော့ မတိုးပါရစေနဲ့ အပေါ်မှာ ပြောထားတာနဲ့တင်တော်တော်
ဒါက (wordpress local အတွက်)
နောက်တစ်ခုက (wordpress Free တဲ့)
ဒေါင်းပြီးသာကြည့်တော့ (ကို ကယ်တော်မူကြီးရေ)